Global Aawaj | गर्भावस्थाको यौन सम्पर्क कति सुरक्षित? गर्भावस्थाको यौन सम्पर्क कति सुरक्षित?
महिला गर्भवती हुँदा धेरै कुराको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। एक सानो गल्तीले पनि गर्भपात हुने जोखिम बढी हुन्छ। त्यसैले धेरै जोडीहरु गर्भावस्थामा यौन सम्बन्ध बनाउन डराउँछन्। अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने अधिकांश जोडीहरु गर्भ बसेको तीन महिनापछि सम्बन्ध बनाउँदैनन्।